Miyuu qeyb ka noqon doonaa Lionel Messi kulanka El Clásico, kaddib dhaawacii soo gaaray?? – Gool FM
(Barcelona) 27 Sebt 2019. Sida ay saxaafada Spain sheegtay xiddiga reer Argantina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa garoomada ka maqnaan doono in muddo ah, sababa la xiriira dhaawaca uu qabo.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in Lionel Messi laga yaabo inuusan u ciyaarin wax kulan ah kooxdiisa Barcelona muddo dhan ilaa iyo hal bil.
Haddii ay dhacdo in Lionel Messi uu garoomada ka maqnaado mudo bil ah, waxaa yaraan karta fursada uu kaga qeyb galayo kulanka la wada sugayo El Clásico ee horyaalka La Liga, kaasoo labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid ku dhax mari doono garoonka Camp Nou 26-ka Oktoobar.
Messi ayaa soo gaaray dhaawac kulankii Villarreal, ee ka tirsanaa kulamada Lixaad horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan.
Barcelona ayaa ku dhawaaqday in Lionel Messi uu qabo dhaawac muruqa ah oo u dhaw dhanka bowdada lugta bidix, dib ugu soo laabashadiisa garoomadana ay ku xirnaan doonto mudada uu ku soo kabto.
Wararka ka imaanaya gudaha Spain ayaa waxay sheegayaan in kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi uu seegi doono kulanka soo aadan horyaalka La Liga ay kula ciyaari doonaan naadiga Getafe iyo sidoo kale kulanka tartanka Champions League ee Inter Milan.